မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဌ နိုင်ထောမွန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း » Myanmar Peace Monitor
မေး-လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ အများအားဖြင့် ဘယ်လိုအချက်များ တစ်ဆို့မှုတွေ ရှိပါသလဲ?
ဖြေ-ကျနော်တို့အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ်လိုလားလို့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါပြီ၊ လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ အာဏာတော်တော်ရှိတဲ့တပ်မတော်နဲ့ စကားပြောရပါတယ်၊ အစိုးရကိုလည်း သူတို့ သိပ်ပြီးအမှတ်ပေးချင်ပုံမပေါ်ဘူး၊ ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေ အခြေချခဲ့တဲ့ ဇီးနှစ်ပင်ဂိတ်(သံဖြူဇရပ်-ဘုရားသုံးဆူမော်တော်ကားလမ်း) လိုမျိုး ကျနော်တို့ဆီ စစ်တပ်ပြန်အပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စက မပြီးပြတ်သေးဘူး၊ နောက်ပြီးတော့ JMC-S လို တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီတွေမှာ မွန်ပြည်နယ် တစ်နေရာပဲပေးတယ်၊ ကျနော်တို့က ၃ နေရာရမှ အဆင်ပြေနိုင်မယ်၊ ဒါကို ကျနော်တို့တာဝန်ယူနိုင်တယ်ပြောဆိုထားပြီး ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေတုန်းပဲ၊ ကျနော့်အမြင်ကတော့ မပြေလည်တဲ့အချက်တွေကို ပြောဆိုလည်းပြောကြရတာပေါ့ ကျနော်တို့က လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးလေ၊ ပြေလည်ဖို့ ဆက်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးနေရတုန်းပါ၊ ပြေလည်နိုင်မလား မပြေလည်လားတော့ ပြောမတတ်သေးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ခုထိမပြေလည်သေးပါဘူး၊ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေရတုန်းပါပဲ၊ အများအားဖြင့် တပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာပဲ မပြေလည်တာ၊ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် အမြင်မတူတာတွေကို ပြောဆိုဆွေးနွေးနေရတုန်းပါပဲ။
မေး-ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံအပေါ် အားရကျေနပ်စရာရှိပါသလား?
ဖြေ- ဒီ၂၁ ရာစုပင်လုံက ကျင်းပဖြစ်ရုံလေးပဲမြင်မိတယ် အချိန်လည်းတော်တော်လွန်မှ ကျင်းပဖြစ်တာဆိုတော့၊ ကျနော်တို့ ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေ သုံးသပ်တာကတော့ ညီလာခံက အနှစ်သာရ မရှိပါဘူး၊ အချိန်လည်းတော်တော်လွန်နေပြီဆိုတော့ မလုပ်မဖြစ် ဝတ်ကျေတန်းကျေ လုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့သဘော၊ အနှစ်သာရနည်းနည်းနဲ့ လုပ်ဆောင်သွားရတာမျိုးပါ၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးချင်တာတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးမရတာမျိုး ဖြစ်ခဲ့တယ်။
မေး-ဒါဆိုရင် ရှေ့ခရီးဆက်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ ရှာကြံလုပ်ဆောင်သွားမှာလဲ?
ဖြေ-ကျနော်တို့အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတယ်၊ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရော NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ပါ ကျနော်တို့ဆက်လက်ညှိနှိုင်းနေဆဲပါ။ လတ်တလောအနေအထားမှာတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောလို့မရသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့အမြင်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ကျနော်တို့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးတော့ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားရမှာပါ။
မေး-မွန်ပြည်သစ်အနေနဲ့ UNFC ခေါင်းဆောင်နေရာမှာ ရှိနေတော့ UNFC အခန်းကဏ္ဍမှာ ဘယ်လိုဆက်သွားမှာလဲ?
ဖြေ-UNFC နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာကတော့ ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပဲ ပါဝင်သွားမှာပါ၊ ဒါကို UNFC က ပြန်လည်စဉ်းစားပေးပါလို့ ပြောထားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဗဟိုကော်မတီက ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပဲ ပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီ၊ UNFC ညီလာခံကျင်းပတဲ့အခါ တပ်ပေါင်းစုကနေ ကျနော်တို့ နုတ်ထွက်မယ်၊ အခုညီလာခံမကျင်းပဖြစ်သေးတော့ ကျနော်တို့ နှုတ်ထွက်လို့ မရသေးပါဘူး၊ ညီလာခံဖြစ်တဲ့အခါ ကျနော်တို့နှုတ်ထွက်ပြီး ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းလို ပါဝင်သွားမယ်၊ ဥပမာအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါပြီ၊ ကျနော်တို့မှာ အခက်အခဲအဖြစ်မခံချင်ပါဘူး၊ ကျနော်တို့က NCA အတိုင်း မဖြစ်မနေ လျှောက်လှမ်းသွားရမှာပါ၊ ဒါကို တပ်ပေါင်းစုကလည်း လက်ခံထားတာပဲလေ၊ ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ လက်မှတ်ထိုးပြီးအနေအထားမျိုးနဲ့ ကျနော်တို့ ဆက်သွားရမယ်လို့ မြင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် UNFC က ပြန်စဉ်းစားပါလို့ ဆိုတယ်၊ သို့သော် ကျနော်တို့ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေ ဆုံးဖြတ်ထားတာက ခုနကပြောတဲ့အတိုင်း ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပဲ ပါဝင်သွားမယ်၊ အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အခါ ကျနော်တို့သွားပြီး တက်ရောက်မယ်၊ ဒါလောက်ပဲရှိတော့မယ်၊ ဆက်လက်ပြီး တာဝန်ယူလို့ မဖြစ်တော့ပါဘူး၊ ကျနော်တို့ စဉ်းစားချက်က ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေလိုမျိုး နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး၊ UNFC အပေါ် ကျနော်တို့သဘောထား အဲလိုရှိတယ်။
မေး-အကယ်၍ UNFC မှာ ဆက်ပြီးရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလဲ?
ဖြေ-လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်တော့ UNFC ကို သူတို့(အစိုးရ) မသိတော့ပါဘူး၊ ကျနော်တို့က လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပြီ၊ လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရမှာပါပဲ၊ အဲလိုမလိုက်ပါ မဆောင်ရွက်ရင်တော့ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်မပြေလည်မှုတွေအတွက် စိုးရိမ်လာရတာပေါ့၊ UNFC က ဒီအတိုင်းပဲ အချိန်ယူပြီး ဆက်လက်ညှိနှိုင်းနေမယ်၊ ကျနော်တို့က NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဖွဲ့ဖြစ်တယ်၊ UNFC က လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့၊ ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက ဒီလိုအနေအထားနှစ်မျိုးပေါ်မှာ ခက်နေရတာပါ၊ ကျနော်တို့ လက်မှတ်ထိုးပြီးဖြစ်တာမို့ လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေလို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါတယ်၊ လက်မှတ်မထိုးသေးဘူးဆိုရင် တမျိုးပေါ့။ လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အတွက် သူတို့မှာ တာဝန်ခံဖို့မလိုအပ်ပေမယ့် ကျနော်တို့လက်မှတ်ထိုးပြီးအဖွဲ့ကျတော့ တာဝန်ခံရမှာဖြစ်တော့ အဖုအထစ်တွေမရှိရအာင် ချင့်ချိန်ရတာပေါ့။ ဒါကြောင့် တပ်ပေါင်းစုကနေ ထွက်မှဖြစ်မယ့် အနေအထားကို ရောက်ရှိလာရတာပေါ့။
မေး- အကယ်၍ UNFC က နှုတ်ထွက်ပြီး NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့ PPST မှာ မွန်ပြည်သစ်ပါဝင်ဖို့ စဉ်းစားချက်တွေ ရှိပါသလား?
ဖြေ- လောလောဆယ် ကျနော်တို့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး၊ PPST ကိုဝင်ရောက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းချက်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်၊ UNFC ကနေ ကျနော်မနှုတ်ထွက်ရသေးတော့ ကျနော်တို့ အဖြေမပေးသေးပါ၊ လက်ရှိ ကျနော်တို့က PPST+2 အနေနဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊ ရှေ့မှာ ကျနော်တို့ UNFC ကနေ နှုတ်ထွက်ပြီးတဲ့အခါ ဆက်လက်စဉ်းစားကြတာပေါ့။
မေး- အချုပ်အားဖြင့် လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ မွန်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်ဆိုတာ ဥက္ကဌကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုတိုက်တွန်း ပြောကြားလိုပါသလဲ?
ဖြေ- စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက် လူထုအားလုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်၊ ကျနော့်အမြင်ကတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေချည်းဘဲ ကြိုပမ်းနေရင်တော့ ခရီးရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒေသခံ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ပါဝင်လှုပ်ရှားကြမှသာ အောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တိုက်တွန်းလိုတာကတော့ ပြည်သူတွေ ဝိုင်းဝန်းပြီး ပါဝင်လှုပ်ရှားပေးကြပါ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံစစ်စစ် ပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းဆိုနေကြတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက် ပြည်သူအားလုံး ပါဝင်ပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
မေး- ခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် မွန်သတင်းအေဂျင်စီက အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ ။